Ogaadeen (beel) - Wikipedia
Qaabiilo kala duwan.jpg
Islam (gaar ahaan Sunni, Suufi)
Jidwaq, Absame, qabiilo kale Daarood ka tirsan, iyo Beelaha Soomaalida
Ogaadeen (, ) waa qabiilka ugu badan beesha Daaroodka, ee ku nool dhulbaxsinta konfuur iyo galbeed, ee Dadka Soomaalida. Ogaadeenku waxay deegaan ku yihiin Itoobiya (gaar ahan deegaanka Ogaden), wadanka Soomaaliya (gaar ahaan koonfur), iyo wadanka Kiinya. Deegaan ahaan, wuxuu Ogaadeen soohdin qabiil la leeyahay Isaaq iyo reer darawiish dhinaca waqooyi, iyo qowmiyadda Oromo dhinaca galbeed, iyo dhinaca koonfur wuxuu Ogaadeen soohdin la leeyahay Rahanweyn.
Daarood waa beel ka mid ah beelaha Soomaalida kuwaasi oo degan Geeska Afrika. Beesha Daarood waxaay degtaa wadanka Soomaaliya, wadanka Itoobiya iyo deegaano ka tirsan wadanka Kiinya. Guud ahaan, beesha Daarood waxaa ka farcama reero badan oo ka mid yihiin: Absame, Ogaadeen, Harti (Reer Darawiish, Majeerteen iyo Warsangali), Dishiishe, Lailkase, iyo beelo kale.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogaadeen_(beel)&oldid=204866"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Agoosto 2020, marka ee eheed 12:55.